Arbetsförmedlingen oo si rasmi ah u joojiyay barnaamijka Etableringslots | Somaliska
Hay’ada shaqada Sweden (Arbetsförmedlingen) ayaa saakay si rasmi ah u joojisay barnaamijka Hagayaasha dadka cusub ee loo yaqaan (Etableringslots) iyadoo agaasimaha hay’ada Mikael Sjöberg uu ku tilmaamay barnaamijkaan mid lagu qaldamay oo sidiisaba aysan haboonayn in Sweden laga dhaqan galiyo.
AF ayaa sabab uga dhigtay joojinta barnaamijkaan in cabashada ka imaanaysa dadka ka tirsan ay cirka isku shareertay isla markaana ay xitaa shirkadaha qaarkood ku dhaqaaqeen arimo dambiiyo ah kuwaasoo ay ka dhex abuureen barnaamijka. Shaqaalaha AF ayaa waxaa la soo daristay cabsi iyo hanjabaad joogto ah. Xitaa waxaa soo baxday in shirkadaha qaarkood ay la shaqeeyaan ururada argagixisada oo ay dadka u soo ururiyaan.
AF ayaa maanta ka bilaabata aan aqbali doonin shirkado cusub in ay ka dalbadaan barnaamijkaan, isla markaana siisay shirkadaha hada barnaamijka wada 3 bilood in ay shaqada ku soo afjaraan. Dadka ka tirsan barnaamijka ayaan loo ogolaan doonin in ay shirkada badashaan.
Musuq maasuqa, dambiyada, iyo cabashada ka dhanka ah shirkadaha Lots ayaa noqday mid caadi ah sanadihii dambe iyadoo ay AF isku dayeen dhowr jeer in ay isbadalo ku sameeyaan barnaamijka iyagoo sanadkii hore shirkado badan kala noqday ogolaanshihii balse taasi ayaa muuqata in aysan xal noqon.
Waxaan jeclaan lahaa dadka dhan ineey shaqeestaan balse waa meel aan shaqo laguu ogoleen baratiik lagugo cabaayo
dadka wax badan ayey u qaban jireen marka laga reebo musuq maasuqa
joojiya dheh masuq masuqoda ayaba nacnee
ASC.LOOTISYADE INTOODABADAN RUNTII WAA MUSUQMAASUQ SABABTOO AH DADKA WAXBA UMAQABTAAN RUNTII QAARKOOD TELEFANADE KAMA QABTAAN DADKE LACAG XAARAAN AH OO BEEN BEEN AYAY CUNAAN DADKA KUMBIYUUTAR QIIMOLAHAYN INTA SIIYAAN AYAY HADANE MARKII LAGA WAREEGO SOO CELI EYKULEEYIHIIN MARKE WAA SIDA MIINSHAARTII OO KALE MARKEY KOR USOCOTO WAXCUNTO IYO MARKII EY HOOS USOCOTO LABADABO MARKE WAX FAAIDO AH OO WEYN OO LASHEEGIKARO RUNTII MALEH OO WAXAA XAQIIQO AH IN AAN LOO SHALAYNDOONIN WADANKAAN MEELKASTO DADKUSAACIDO MALAGWAAYO MEELKASTANE TALK AA JOOGO MARKE WAXEY QASAARINJIREEN LACAGO FARABADAN OO KHASAARO AH MARKE LOOTIS BAX DHEHBALAAYO IDIIN ARAGTAYEE
dhaman waan u mahad ceelina ciidi so qaban qabisey in lotiska la xiro wax badan ayey dad ku kibrene
February 22, 2015 at 11:55
Ilahoow yaa lafurin. Telefonka dadka kudhagestaan aan banacee
kkkk Waxaa uugu darnayd waxaad arkaysaa Nin Lots ah iyo kii uu Lots ka u ahaa oo isku aqoon ah xaga luuqada ama lagaba badiyo luuqada Lots ka…!!!!